Amin'ny fotoana ho avy Apache OpenOffice sa LibreOffice? | Avy amin'ny Linux
Amin'ny fotoana ho avy Apache OpenOffice sa LibreOffice?
Fantatsika rehetra ny tantaran'i OpenOffice.org ary ireo hetsika samihafa nanosika ny mpamorona maro hanangana Ny Document Foundation ary nantsoina ny fork LibreOffice.
Tantara fa tamin'ny farany dia nifarana tsara kokoa noho ny nandrasana, tsara OpenOffice.org niafara tamin'ny tanan'ny goavambe, mpanamboatra tetikasa manana loharano mivelatra misy dikany lehibe: Apache Software Foundation. Ary inona ity lahatsoratra ity? Tsotra:
Ny hitanao dia takelaka vaovao (amin'ny endrika Calligra) izay ho hita ao amin'ny OpenOffice 4.0. Ary eto no isalasalako, tsara Apache dia miloka amin'ny fanovana ny interface, zavatra iray izay efa nitomanian'ny mpampiasa maro.
Tsy fantatro hoe manao ahoana ny fivoaran'ny Office Suites roa, tsy haiko raha "mampindrana" ny fanatsarana, ny fanovana ary ny hafa izy ireo, ka tsy afaka nilaza aho raha LibreOffice handray andraikitra mitovy amin'izany, fa raha tsy izany, iza amin'ireo no hofidinao? Satria raha milaza ny marina aho, ity fiovana amin'ny endrika ivelany ity dia mahafaly ahy be dia be, ka mila mampitaha fotsiny aho ary mahita izay afenin'izy ireo ao ambanin'ny sarona.
Afaka mahazo fampahalalana bebe kokoa momba ny fanovana ao ianao OpenOffice en Ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Amin'ny fotoana ho avy Apache OpenOffice sa LibreOffice?
63 hevitra, avelao ny anao
Toa tsara izany, saingy tsy hitako ny mampiasa ny tontonana mitsangana isan'andro. Mijanona ao Libreoffice aho.
Tiako izany tao Calligra, izay mitranga dia tsy tiako ny fomba famolavolana azy ao amin'io Office Suite io ... hitako fa sarotra be izany.
roa izahay. Tsy misy toa ny interface birao mahazatra 2003
3ndriago dia hoy izy:
Eny, tsy ela akory izay dia nanontany tamina lahatsoratra bilaogy iray hafa aho hoe maninona no tsy misy miresaka momba ny OpenOffice intsony ary nilaza tamiko i ELAV fa efa nandroso i Libre. Mampiasa Windows isan'andro aho ary na izany aza dia aleoko ny OpenOffice noho ny MS suite, haingana kokoa ny mitondra azy ary (mazava ho azy) tsy mandany antsasaky ny vidiko izany. Tsy fantatro ny anatiny sy ny atin'ny Open sy Libre, saingy fantatro fa ny Open dia mamaha ny olako rehetra ary malaina aho manomboka "mamorona" zavatra hafa. Midika izany fa hifikitra amin'ny OpenOffice aho!
Mamaly an'i 3ndriago
Gady dia hoy izy:
Efa naneho hevitra momba azy io aho indraindray, ary tsy haiko raha azo raisina ho bibikely na ahoana ny fomba hitaterana azy, fa i LibreOffice Writer dia nanambatra ny fomba Lohateny sy Lohateny, nanaparitaka naoty an-jatony modely, Tsy maintsy nankany amin'ny OpenOffice aho mba hahitako azy ireo tsara, ary nanomboka teo dia manohy miaraka aminy aho fa, raha ny marina, anio dia tsy misy fahasamihafana be mihoatra ny antsipiriany sasany. Amin'ity fanovana ity dia mamporisika anao aho hanohy ity suite ity.
Valiny tamin'i Gadi
Rehefa mieritreritra an'io aho hatramin'ny nampiasako ny Ubuntu ary nifindra tany Libreoffice aho dia tsy nanome fotoana hafa an'i Openoffice.
Ratsy loatra fa raha ny fahitako azy ao Chakra (toerana ijanonako) dia toa tsy manana izany ao amin'ireo trano fitahirizana.
Tsy maintsy nametraka tao amin'ny Arch aho avy AUR, heveriko fa tsy manana fiankinan-doha ivelany izy ireo mba hahafahanao manandrana Packer, eny, avy eo tsy maintsy ampidininao ny fonosana fiteny ary apetraho amin'ny alàlan'ny fandikana an-tanana ireo rakitra ao / opt, izany hoe izay ametrahana azy.
Mety tsara ny facelift, na izany aza tsy mametraka openoffice aho satria ny ankamaroan'ny distros dia manana libreoffice ho default.
Na dia mieritreritra aza aho fa tsy manisy fiheverana be loatra ny bika aman'endrika, angamba tokony hifantohany ny ezaka ataon'izy ireo (miresaka manokana momba an'i Libreoffice) amin'ny fanamboarana antsipiriany mbola miandry.
EnjoyConde dia hoy izy:
Ity takelaka ity dia toy ny fiasa hafa izay hampiharina, indrindra ny interface, ilay nisy tao amin'ny birao fiasan'ny birao Lotus Symphony an'ny IBM, izay nifototra tamin'ny OpenOffice ary nomen'ny IBM ho an'ny Apache Foundation ihany koa; noho izany dia heveriko fa ny biraon'ny birao roa dia hiaraka amin'ity kinova ity.
Valiny amin'ny EnjoyConde
Vao avy namaky aho fa, nandova zavatra avy tamin'i Lotus Symphony ... ankehitriny, tsy maintsy jerentsika raha toa ka mandray azy ireo koa ny LibreOffice.
su - trollmode
teny miafina: ********
IZAY MAMPIASA RIBBON INDRINDRA !!
Elav, bro, araka ny filazan'i @EnjoyConde, ity sary ity dia mampiseho ny ampahan'ny zavatra Lotus Symphony, efa hitako ny web browser izay nampiditra ity birao ity ary izany no antony nanombohako :-P.
Farany dia efa tara izy ireo. Midika izany fa hiaraka i Oo sy Symphony, tsara !!! Nataonao XD ny androko.
Eny, raha tsy mandray ireo fanovana ireo ny LibreOffice ... handeha amin'ny OpenOffice aho 😀
Efa manana tongotra iray aho any, minoa ahy XDDD Tsy fantatrao rahoviana?
¬¬ Mandehana miaraka amin'io BSD sy Chrome io hiala eto .. HAHAHAHA… Efa nomeko anao ny rohy hahafahanao misintona sy manandrana ..
socar dia hoy izy:
Ry Elav malala
Tsara tarehy ity famolavolana ity saingy tsy nohamarinina, izany hoe ratsy endrika, satria ny saha manana endrika marindrano, toy ny saha amin'ny fisafidianana ny endri-tsoratra, dia tsy tokony hiditra anaty bara mitsangana satria marindrano izy ireo, ao anaty Solosaina finday misy 11 sy 13 santimetatra, takelaka, manala ny sehatry ny fahitana betsaka ary tsy manararaotra toerana.
Marina fa misy ny fanatsarana ny maso fa tsy ny fanatsarana ny famolavolana ary samy ilaina ny mihevitra ny famolavolana interface.
Fitsikerana manorina io.
Mamaly an'i socar
Azonao atao ny manaraka ny vaovao LibreOffice avy amin'ny fiarahamonina ofisialy ao amin'ny GOOGLE +.
Charles Schulz sy Florian Effenberger no miandraikitra ny fitantanana ny pejy
LibreOffice na OpenOffice; Raha mbola mijanona ho tetikasa Open Source izy ireo, heveriko fa tsy misy dikany firy ny fampiasana ny iray na ny iray hafa, satria amin'ny farany dia manao asa mitovy izy ireo ary mitazona ny fenitra (tsy toa ny MS Office izay tsy mifanaraka amin'ny izy ireo), heveriko fa ny fampiasana sahady Hiankina amin'ny tsiron'ny tsirairay izany ary tsy misy zavatra voasoratra momba izany. Ho ahy dia mifikitra amin'ny LibreOffice aho ary mivavaka mba tsy hanatevin-daharana ny fironana amin'ny tontonana mitsangana (tena halako izy ireo) ary amin'ny farany, raha manao izany izy ireo, dia misy farafaharatsiny ahafahana manafoana azy ireo ary manohy mampiasa ilay fomba "mahazatra "
Raha vao henoko ny vaovao fa namindra ny fahefana ENY tany Apache i Oracle dia noheveriko fa "maninona!? samihafa ny ezaka, tsy misy dikany "
Mazava ho azy fa nanana myopia izay ananan'ny mpampiasa tsy GNU / Linux aho rehefa manontany tena izy ireo hoe "maninona no be dia be ny distro isan-karazany" ...
Mahaliana fa manohy ny fampivoarana ny Apache i Apache satria io fanahy io indrindra no mampandroso ny fanavaozana sy ny fitomboana.
Ankoatra ny tarehy - tena raisina an-tanan-droa - liana vaovao aho hahita ny fomba fiasan'ny OO sy ny tahan'ny fanjifana loharano, ny endri-javatra ary ny mifanentana amin'ny MSOffice raha oharina amin'ny LibO.
Tsy fantatro raha manitatra aho fa mieritreritra aho fa tsara kokoa noho ny menio Calligra io.
Fa aleoko miandry azy io ao amin'ny toeram-pitsapana fitsapana. Tsy maika ny hifanakalo maimaimpoana aho amin'izao fotoana izao.
Eny, hitako tsara kokoa ihany koa izany.
Amiko manokana dia tsara fa misy sampana roa amin'ity akanjo mahafinaritra ity. Ity interface ity dia manome ahy ny antony 😀. Ary momba an'i Calligra, tiako indrindra izany raha tsy noho ny tsy fitovizany amin'ireo antontan-taratasy .doc
Nilaozako ny OpenOffice.org hatramin'ny nivoahan'ny LibreOffice, ary io no sakafoko isan'andro, na eo aza ny pitsopitsony (toa ilay nolazain'i Gadi) sy ny fisehoany izay nahatonga ahy tsy faly.
Raha toa ny OpenOffice.org fa tsy manana ny olana mahazo ahy ankehitriny amin'ny LibreOffice dia tohizo aho, raisiko izany. Ankoatry ny fisehoany dia tsy dia tsara loatra amin'izy ireo, tiako kokoa ny an'i Calligra fa mampalahelo fa tsy manana zavatra maro ananan'ny hafa izy io ary manana bibikely.
Rehefa mieritreritra an'io aho ... mbola tsy nampiasa OpenOffice mihitsy. Ny fifandraisana akaiky indrindra nifandraisako tamin'i OpenOffice dia tamin'izaho nampiasa Windows, ary tena faly aho nitady ny Microsoft Office 2010 vaovao, izay toa nahafinaritra ahy tamin'ny androny, ary tao anaty fikarohana dia nisy rohy mankany OpenOffice.org niseho tao amin'ny Softonic , saingy tsy liana aho. Ahh, tadidiko ihany koa ny KMS hampavitrika ny MS Office, tsy maintsy nitantana azy isan-kerinandro aho tamin'ny fanavaozana mandeha ho azy.
Fa hatreto OpenOffice, inoako fa hanandrana aho.
Tiako io fomba mitsangana io.
Rehefa namaky ny lohateny dia hoy aho hoe, Mazava ho azy fa LO !!
Fa toy ny mahazatra Elav, nosaronanao ny vavako ..
Na dia mety tsy tena manandrana azy haingana aza aho, satria mahazo aina amin'ny LO aho.
Fa ny zavatra tsara dia ny fandrosoany mivoatra, ary tsy atokana ho an'ny fakana tahaka ny vaovaon'ny LO fotsiny izy ireo.
Heveriko fa diso ianao, tsy fantatro hoe avy aiza ianao no maka tahaka ny LO. Raha mikaroka sy mianatra kely ianao dia ho hitanao fa mizara zavatra betsaka ireo ekipa amin'ny suite roa tonta, ary miharihary fa mifampitaiza izy ireo. LibreOffice kinova 3.7 dia hampiditra ny tranombokin'ny fanafarana sary SVG an'ny Apache, ary aza gaga raha toa ka mipoitra ao amin'ny LO koa ny bara OO raha toa ka mandeha tsara.
LibreOffice 3.7 dia tsy ao amin'ny tondrozotra LibreOffice, dia ho 4.0 izany, na dia Lo hatramin'ny 3.4 aza dia manafatra svg.
Mety ho resin'ny delestazy aho satria napetraka eto:
Voafitaka ve aho?
Tamin'ny alàlan'ny bilaogin'izy ireo ofisialy, ny olona ao amin'ny The Document Foundation dia nanambara ny famoahana ny kinova 3.6.5 an'ny Libreoffice suite open office, izay misy fanatsarana sy fitoniana.
Ity kinova ity dia fanavaozana ny fikojakojana ka tsy misy fiasa na fiasa vaovao ary mifantoka amin'ny fanamboarana bibikely.
Tsara ny manamarika fa ity kinova ity no fanavaozana farany hatao ao amin'ny sampana 3.6.x.
Ny fanavaozana lehibe Libreoffice manaraka dia ny 4.0.0 ary havoaka eo anelanelan'ny 4-10 febroary.
Amin'izao fotoana izao dia nandray lalana hafa ny LibreOffice ……… andao hojerentsika izay hitranga amin'ny ho avy.
Ho ahy »olona firefox» manokana any LibreOffice dia toa tsy dia misy fampiasa firy io.
Izaho manokana dia aleoko ny LibreOffice! 😉
LibreOffice. Fa maninona Satria ao aminy no ahafahako manitsy ny fandikan-teny - Izaho no mpandika teny;) -, satria mavitrika kokoa ny fampandrosoana, satria izy io dia tohanan'ny distros sy ireo orinasan-rindrambaiko malalaka (Canonical, Red Hat ary SUSE / Novell, ho fanampin'ny ankolaka an'i Microsoft) ary satria manome antoka ny fahalalahan'ny mpampiasa miaraka amin'ny fahazoan-dàlana izay tsy ataon'i Apache.
Okay, mpandika teny ... angamba azonao atao ny manazava fanontaniana iray ho ahy, misy mitovy aminy ve ao amin'ny GNU / Linux ho an'i Trados? dia hatramin'izao aho no nitady ary toa tsy misy mahasolo azy ary io dia iray amin'ireo rindrambaiko Windows vitsivitsy noterena hampiasa ...
Salama charlie Tsy mbola nampiasa Trados mihitsy aho, ary mieritreritra aho fa tsy misy na inona na inona ao amin'ny Linux izay klone tonga lafatra ao aminy, saingy azoko atao ny manoro an'i Virtaal; vantany vao mianatra ny hitsin-dàlan'ny keyboard ianao dia io no programa mahomby sy haingana indrindra any. Misy koa KBabel, GTranslator, ary POEdit, saingy toa tsy mampiditra endri-javatra betsaka toa an'i Trados izy ireo. Iza no mahalala, angamba indray andro any, ireo orinasa manana rindrambaiko tompona orinasa ireo dia hijanona tsy hiraharaha antsika intsony ary hamoaka kinova ho an'ny Linux ...
Trado dia fampijaliana na aiza na aiza no jerenao, tsy hoe satria izy io dia fitaovana de-facto ho an'ny mpandika teny ary mitaky anao hianatra sy hampiasa izany amin'ny karazana fandikan-teny ofisialy ofisialy, fa koa satria ankoatry ny mihazakazaka amin'ny Windows ihany, dia mila apetraka eny na eny. ny suite MSOffice satria tototry ny makro ActiveX sy VB.
Trados dia vokatra mendrika ny ho faty tsy ho ela, tsy noho izy manokana Windows, fa mahatsiravina ny fomba "mivoatra", fampandriana adrisa ho an'ireo mpandahatra fandaharana eto an-tany izany, ary tsy afaka manao zavatra mahatsiravina noho ny fikasana.
Mahaliana, saingy heveriko fa ny LibreOffice dia efa mialoha lavitra ny OpenOffice (Elable dia ela vao namoaka). Ny Apache Foundation dia tsy maintsy hanao ezaka lehibe raha tsy te avela ho any aoriana izy.
Ny zavatra heveriko fa hahaliana kokoa aza dia ny handehanan'ny olona tsirairay avy amin'ny làlany manokana, fa ny "hifandrafy" ny toetra mampiavaka azy (tombony azo avy amin'ny rindrambaiko maimaimpoana).
Azonao atao ve ny manana ny efitrano roa ary mifidy izay hiasa? Amin'izay dia ho mora kokoa ny mahita ny tombony sy fatiantoka ny tsirairay avy eo manapa-kevitra hoe iza no hofoanana ary iza no avela ao.
Ity dia iray amin'ireo olana lehibe indrindra eto amin'ny tontolon'ny rindrambaiko maimaimpoana. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe, mendrika ny hanana tetikasa roa mitovy amin'ireo toetra ireo ve izy ireo?
Tao amin'ny Birao Libre izy ireo dia nifantoka tamin'ny fanatsarana ny kaody, manome fitoniana sy fanatsarana ny fahombiazana, raha toa kosa ny fiovan'ny interface (izay iantsoan'ny mpampiasa azy) toa ratsy kokoa noho ny faharoa.
Ankehitriny ao amin'ny Open Office dia misy fanavaozana amin'ny interface ampiasaina, izay mety hahasoa.
Moa ve tsy samy manana ny zavatra tena tsara izy roa? Maninona no mandany loharano sy ezaka be dia be amin'ny fanaovana adidy roa sosona?
Raha ny hevitro, ity olana ity dia iray amin'ireo zava-dehibe tokony resena, raha mitady hiditra mafy ho an'ireo mpampiasa izay tsy mahalala na tsy manararaotra ny Linux sy ny rindrambaiko maimaimpoana ianao.
Raha ny hevitro manokana dia heveriko fa ny fananana tetikasa roa mifaninana sy miara-miasa amin'ny fotoana iray dia mahasoa ho an'ny rehetra, na eo aza ny fandikana ny ezaka lazainao. Raha tsy misy afa-tsy safidy iray dia mety mijanona ny tetikasa, fa ny fifaninanana matetika dia zava-manitra mahasoa hamporisihana ny fampandrosoana.
Izaho manokana dia nanomboka taona maro lasa izay tamin'ny fampiasana LibreOffice, nifindra monina avy eo KOffice tao amin'ny tontolon'ny KDE, ankehitriny dia mampiasa KDE miaraka amin'ny OpenOffice aho ary tsara ny zava-drehetra. Te hizaha toetra atsy ho atsy ny kinova 4 an'ny OpenOffice sy Kalligra izay mbola tsy nahafinaritra ahy ny niara-niasa tamiko.
reduardowise dia hoy izy:
Mino aho fa na inona na inona fanoloran-tarehimarika iray raha ny iray kosa mifantoka amin'ny fanatsarana ny fahombiazany, mino aho fa ny fandraisana andraikitra roa raha toa ka mitazona hatrany dia handray soa betsaka avy amin'ny mpampiasa satria misy safidy azo isafidianana ary izany no zava-dehibe momba ny rindrambaiko maimaimpoana. fahalalahana.
Mazava ho azy fa ny libreoffice dia manana tombony kely noho ny openoffice, mazàna noho ny fotoana nijanonan'ny tetikasa, izay nifantohan'ny olona tao amin'ny libreoffice ihany koa ny fanatsarana ny kaody, ny fanatsarana ny fifanarahana ary ny iray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra nambaran'izy ireo rehefa nanomboka ny tetik'asa, avelao amin'i Java ny fiankinan-doha ary mieritreritra aho fa nahavita asa tena tsara izy ireo hatreto.
Mazava ho azy fa ny olona apache dia afaka "manamafy" ny fisokafana amin'ny asany noho ny nanomezan'i ibm azy ireo an'i Lotus Symphony ary lojika ny fitambaran'ny openoffice miaraka amin'i Lotus Symphony no tena mahaliana.
tena azo inoana fa hanomboka handefa endri-javatra hita maso amin'ny openoffice amin'ny edisiany 4.1 na angamba 4.2 ny fototra antontan-taratasy, raha toa kosa ny apache dia handefa endri-javatra anatiny avy any libreoffice ka hatrany amin'ny openoffice…. Raha fintinina, raha mbola misokatra ny tetikasa roa dia samy handray soa isika rehetra!
arahaba avy amin'ny libuntu.wordpress.com 😉
Valiny amin'ny reduardowise
Izaho manokana dia tiako kokoa ny tontonana mitsangana, satria mety hampiasa tsara kokoa ny habaka amin'ny efijery malalaka, indrindra rehefa miasa amin'ny takelaka sy fampisehoana, izay ilainao ny toerana marindrana misimisy kokoa hahitana tsara kokoa ilay antontan-taratasy. Noho izany, hampiasa ilay suite amin'ny tontonana mitsangana aho.
Mitovy ny eritreritro.
Miasa amin'ny masinina roa aho, birao misy monitor 24 widescreen ary solosaina finday misy efijery 15,6 ″, ary amin'ireo tranga roa ireo dia misy banga be eo amin'ny sisiny raha tsy misafidy ny hampiseho pejy roa indray mandeha aho, saingy tsy hitako izay dikany satria Iray monja aho no manitsy.
Ao amin'ny LO dia manana takelaka eo anilan'ny sisin-dahatsoratra ny Navigator Document sy ny Styles. Samy ilaina be amiko daholo izy roa amin'ny antontan-taratasy, izay no tena ampiasaiko.
Luis Alfredo dia hoy izy:
Raisina an-tanan-droa ny safidy maimaim-poana rehetra, ity no hatsaran'ny loharano misokatra ...
Valiny tamin'i Luis Alfredo
sML dia hoy izy:
Tato ho ato aho dia mijery pejy miaro ny tsiambaratelo ary tsy mivarotra ny angon-tsainay amin'ny antoko fahatelo, tsy manivana, mampiasa rindrambaiko maimaim-poana satria tokony ho maimaimpoana sy ho azon'ny rehetra jerena ny fahalalana ary tonga teto amin'ity pejy ity aho.
Ny tiana hambara dia ny fanovana kely ny lohahevitra, 90% amin'ireo pejy izay "miady" amin'ireo orinasa, amin'ireo fikambanana izay manitsakitsaka ny zonay sasany sy ny lava sns ... saika ny Facebook, WhatsApp, Twitter, Google sns daholo no ampiasaina. .. izay raha ny fahitako azy dia somary tsy mitombina, satria "mimenomenona" ianao amin'ny fanao sasantsasany izay tanterahin'ireo pejy rehetra anananao ny rohy ...
Izany dia nilaza, ary raha sendra manampy olona / ianao ... misy safidy hafa tsy mandika ny zontsika. Lavabit.com (mailaka), Duckduckgo.com (google), Diaspora, Line, Identi.ca ...
Ampiasao izany ...
Valiny amin'ny sML
juant dia hoy izy:
Misaotra betsaka, tsy nahalala tanteraka ny avabit.com, Duckduckgo.com, sns aho. Toa tsy hampiasa Google intsony aho. Izay ianaranao eto !!!
Mamaly an'i juant
Ahoana raha ny fahitako ny Oo izay tsy tiako, dia mbola ratsy toa an'i Google ihany ny mpanamarina ny tsipelina, ny olana amin'ny accentuation ary ny tsipelina ihany, satria ny Office Libre dia mandroso. Tsara ny fanasana tarehy, mila manavao hatrany ianao hamelombelona sy hahafahanao manohy, na dia mazava ho azy aza tsy dia be loatra satria mety hahafaty anao izany.
elhui2 dia hoy izy:
Efa nanandrana ireo suite roa aho ary mieritreritra aho fa ny LibreOffice dia miasa xD bebe kokoa, izaho manokana dia tsy liana amin'ny fijery & fahatsapana fampiharana, liana kokoa amin'ny fampiasa azy aho ...
Valio amin'i elhui2
Ralehilahy, izany ve dia ao amin'ny osx libreoffice ny fomba fijeriny sy ny tsapan'ny rafitra, dia mbola azo jerena ihany.
Manantena aho fa izany rehetra izany dia ho amin'ny tsara kokoa, saingy mieritreritra aho fa mbola mifikitra amin'ny LibreOffice 😀
Ho an'ny lehibe !!! Ny hany anontaniako dia ny itovizan'ny antontan-taratasy mitovy amin'ny samy suite ... Manantena aho fa hihaino ahy koa ny mponin'i Calligra, satria ny fotoana farany nandalovako azy, ny tetikasan'ny diplaomako, mangarahara tanteraka ary vita tsara tao amin'ny LibreOffice, nikorontana tanteraka tao Calligra ...
Ho ahy, izaho no ho antsoin'izy ireo hoe "hooker" an'ny Linux. Ary raha fotoana hisafidianana biraon'ny birao ... dia hofidiko izy telo. Ho ahy ny fampifanarahana, na avy amin'ny distro, DE ary ankehitriny ny suite birao, dia mangarahara 😛
Ho ahy ny tena hitako fa tsy ampy ao amin'ny Birao Libre dia ny fanohanana raha manana Open Office izy satria manana vondrom-piarahamonina marobe izay mahalala betsaka ao amin'ny seha-pifanakalozan-kevitra momba ny lafiny teknika rehefa mihoatra ny fototra ny fanitsiana, ary zavatra iray izany LO Mbola tsy manome na amin'ny lisitry ny mailaka na amin'ny antontan-taratasy.
Jonathan @motiongeek dia hoy izy:
Salama daholo, mpikambana ao amin'ny fiarahamonina LibreOffice Venezoela aho ary manana vaovao fa hanao fanovana interface tsara koa ny LibreOffice. Hampidirina ireo takelaka haingo ProjecLibre, izay tena mitovy amin'ny an'ny MS Office 2007+
Valio i Jonathan @motiongeek
Mahaliana .. misy toerana ahafahanao mahita izany fampahalalana amin'ny antsipiriany izany ve?
jjaimes77 dia hoy izy:
Salama, hitako ireo horonan-tsary ireo ary hitako fa mahaliana azy ireo, zaraiko aminareo.
Amin'ity horonantsary ity dia ahitanao ny sasany amin'ireo fahasamihafana misy eo amin'ny libreoffice sy ny openoffice
Mba hanaovana fifindra-monina marina avy amin'ny biraon'ny MS LibreOffice na OpenOffice
Ho an'ny fandaharam-pianarana maimaim-poana sy malalaka dia azonao atao ny mitsidika azy
Valio ny jjaimes77
Mpampiasa Windows aho, ary ny suite voalohany nampiasako dia OpenOffice, style calligra ??? Tsaroako tsara fa ity interface ity dia avy amin'ny IBM Lotus Symphony, izay nifototra tamin'ny OpenOffice, ary rehefa natolotra ny Apache Software Foundation ilay kaody, lojika ny fiovana, ary tena tsara ny toa azy, saingy tsara kokoa ny fampifanarahana ny lotus.
Manuel Macotela dia hoy izy:
Eny, tsy misy, faly aho fa mivoatra ity suite tsara indrindra offimatica ity. Miarahaba antsika roa tonta ary misaotra amin'ny rindrambaiko maimaimpoana… Izay fitaovana matanjaka hiadiana amin'ny fahalalahana.
Valiny tamin'i Manuel Macotela
Fampiasana ny tranokala amin'ny Internet ho toy ny Notepad amin'ny Internet